HomeAfaan OromooVOA Afaan Oromoo fi BBC Afaan Oromoo, Amajjii 15, 2020
Waayee lola Wallagaa keessati deemaa jiruu, ummannii maal jedha.
Marroo Dirribaa: ‘Akkuma barame maqaa balleessuuf malee barattoota ugguruu keessaa harka hin qabnu’
(BBC Afaan Oromoo) — Lixa Oromiyaa keessattii Godinaalee afran Wallagaa keessatti tajaajilli intarneettii, akkasumas bakkeewwan tookko tokkootti ammoo tajaajilli bilbilaa adda cituu ilaalchisee jiraattoonni yaaddoo keessa jiraachuu BBC gabaasuun isaa ni yaadatama.
Adda cituu inatarneetiifi tajaajila bilbila irratti gama dhaabbata teeleekomunikeeshiiniin deebii argachuun hin danda’amne.
Haata’u malee, qondaalli motummaa Oromiyaa BBC’n dubbise godinaalee kanneenitti hojii nageenya uummataa bakkatti deebiisuufi nageenya mirkaneessuu kanuma kanaan duraatu hojjetamaa jira jechuun ala wanti haalicharratti gadi fageenyaan himame hin jiru.
Gama waraana ‘WBO’ bosonatti hafeen ammoo haalli gooda sana jiru maal akka fakkaatu ilaalchisee Marroo (Kumsaa) Dirribaa Ajajaa waraana WBO Lixa Oromiyaa.
‘Marroo waliin galuuf erga waliigalle booda yaada jijjiirrate’
“Akka mataa kiyyaatti ani bilisummaa mataa kiyyaa hin qabu”
“Motummaan akka yaadetti yeroo gabaabduu keessatti WBO irratti ol aantummaa argachuuf kan yaade waan galma hin geenyeef amma tooftaa biraan itti deemamaa jira,” jechuun waraana mootummaafi miseensota isaa gidduutti waraanni gaggeeffamaa akka jiru hima Marroo Dirribaan.
Nagaan dhibuu kanaan wal qabatees, jiraattonni godinaalee Wallaggaa omisha isaanii sassaabbachuuf rakkoo hamaa keessa akka jiranis himaa turan.
Tajaajila bilbilaa Lixa Oromiyaa osoo hin jirree Marroon attamiin bilbilaan argame?
Lixa Oromiyaa bakka garaagaraa keessa bilbilli hojjechaa hin tuure. Dabalataan interneetiin addaan citee turuun kallattii garaagaraan komiin dhagahamaa ture.
Maatiifi firoonni wal arguufillee rakkoo guddaa taheera jedhu jiraattoonni BBC’n dubbise. Haatahu malee, Marroo ammoo bilbiluumaan argachuu dandeenyee.
Kana ilaalchisees attamiin bilbilli harkaa kee hojjate jechuun gaaffii dhiyeessineefiira.
Marroonis haalli kunis kan qabsoofi kaayyoo keenyaaf of irratti hirkachuu keenya mootummaaf mirkaneessa jedheechuun deebii kenneera.
Marroo akkamiin hojjechuu danda’e? Gaaffii BBC irra deebiin dhiyeesseef ture.
“Mootummaan yoo barbaade waggaa tokkoofiyyuu haa cufu. Waraanni keenya qunnamtii guyyaa guyyaa karaa guutuu taheen raawwataa jira.
Kisaaraan isaa mootummaaf malee qunnamtii waraana keenyaa irratti dhiibbaa tokkollee hin qabuu,” jechuun tajaajila bilbilaa gutuu akka argataa jiran hima.
Marroofi TPLF waliin hojjetuu?
SUURAAN MARSAALEE HAWAASAA IRRAA FUDHATAME
Miidiyaa hawaasaarratti Marroon Maqalee jira oduun jedhu torban darbe keessa bal’inaan qoodamaa ture. Kana ilaalchisuunis BBC’n dhuguma TPLF waliin hariiroo qabduu jedhee gaafateera.
“Akkuma kanaan dura Koloneel Gammachuu Ayyaanaafi Jaal Daawud Ibsaa dubbataa turan bilisummaa Oromoo irratti qaama nu tumsu hunda waliin hojjechuu dandeenya.
Kun mirga keenyadha. Maaliif seexana hin tahiin, Oromoo bilisoomsuu danda’a taanaan waliin hojjechuu dandeenya,” jedha Marroon.
Haata’u malee, dhimma TPLF ilaaluun, “Godaannisa bara dheeraa waan qabnuuf gonkumaa TPLF waliin hojjachuu hin dandeenyu,” jedheera.
Sababii isaa wayita tarreessuus, godaannisa bara dheeraa kan akka gudeedamuu shammarran keenyaa, miillaafi harka dhabuu qabsaa’otaa akkasumas jaalleewwan qabsoo du’aniifi jiraataniifi du’aniin isaanii hin bekamne isaan biraa qabna.
Kanatu akka ilmaan Tigiraay waliin hin hojjenne nu dhorka jechuun, ”Ani kaniin jiru bunaafi bosona Oromiyaa keessa,” jechuun deebise Marroon.
Nuyi kan nu bilisoomsuu Amaara ynk Tigiraayii jennee osoo hin taane of dandeenyee deemaa jirra jedhe.
“Ibidda isa dhumaa dhaamsuuf taanaan waliin haasa’uuf qophiidha,” Marroo
Uggura barattoota naannoo Amaaraa Qeellam Wallaggaatti
Barattootni naannoo Amaaraa yuunvarsiitii Dambi Doollootti baraan ugguramanii turan, amma gadhiifaman baayyeen isaanii gadhiifamuun afur qoftu hafuusaanii karaa Obbo Nugusuu Xilaahuniin mootummaan beeksiisuun isaa ni yaadatama.
Kana malees barattuun ijoollee ugguraman keessaan miliqe bahe jette tokkoos, dargaggoota hidhannoo hinqabneetu namoota 18 tahan ugguree bosona keessa tursiise jechuun himte turte.
Nutis gocha kana waraana keessantu raawwatee laata? jechuun gaaffii Marroof dhiyeessineerra. Innis ”kaayyoon keenya barattoota waliin wal hin qabatu. Barattoota irrattis gocha jedhame kana hin raawwannu.”
”Oduun kun akkuma dur barame maqaa waraana keenyaa balleessuuf yoo tahe malee tasumaa gochaa kana keessaa harka hin qabnu. Waraana Bilisummaa Oromoo bakka bu’een dubbachaa jira,” jedhe.
Obbo Taayyee Danda’aa waa’ee Lixa Oromiyaa maal jedhan?
Lixa Oromiyaatti saamicha kan gaggeesse eenyu?
Naannoo jedhame sanatti garuu qaama hidhate hedduun jiraachu kan dubbatuun Marroon, baay’een isaanii kan daldala kontirobaandii irratti bobba’an ta’u hima.
Ilka arbaafi hanqaaquu guchii fa’a naannoo daangaa Oromiyaafi Gambeellaa akkasumas Sudaan irratti akka daldalamu himuun waraanni keenya naannoo sanayyuu hin jiru jedhe.
Waraanni isaanii daangaa Oromiyaan alas akka hin sochoone hime.
Akkuma kanaan dura karaa bahaan uummata Somaalee waliin walitti buusaa turan, ammas Oromoofi Benishaangul Gumuz walitti buusuuf malee waraanni keenya ajjechaa hin raawwatne jedhe.
Dabalataan kun tooftaa mootummaanis waraana keenya dadhabsiisuuf akka carraatti itti fayyadamudha jechuun, warraanni isaa ajjeechaa akka hin raawwanne hima.
Ofii Marroon araaraaf qophii qabaa?
Araarri dhugaan jiraannaan dhimma kana ni xumurra jennee mootummaa gaafataa turrus waan akka kadhaatti ilaalame kan jedhu Marroon, isaan boodas humnaan cafaqanuun akka waan balleessanitti ilaalanuun waraanatti seenan, jechuun feedheen araaraa gama isaaniin jiru fudhatama dhabu hima.
Ammayyuu bilisummaan Oromoo dhufeera jennee hin amannu kan jedhu Marroon, araara kanaan dura jedhamee akka booji’uutti malee akaataa barbaadameen miti jedhee komata.
Haaluma walfakkaatunis gama mootummaan waamicha nagaa taasifameef hin fudhannu jechuun hafan kan jedhutu dhagamaa ture.
Akkasumas tibba Gaaddisni paartilee Oromoo hundeffameetti, asuma jalatti dhimma ijoollee lagatti hafteenii dabalatee rakkoolee siyaasaa keenya hundaa as jalatti furanna jechuun Obbo Lammaa Magarsaa dubbatanii ture.